अमेरिकाले पायो पहिलो महिला उपराष्ट्रपति, बधाई कमला ! - HarekKhabar.com
अमेरिकाले पायो पहिलो महिला उपराष्ट्रपति, बधाई कमला !
अमेरिकाले पहिलो पटक महिला उपराष्ट्रपति पाएको छ । अमेरिका जस्तो बिकसित र शक्तिशाली देशमा समेत महिला नेतृत्व यो तहमा पुगेको पहिलो पटक हो । भारतिय मुलकी आमा र जमाईकन मुलका बुवाकी सन्तान कमलादेवी ह्यारिस को हुन् त?
संयुक्त राज्य अमेरिकाको भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनबाट इतिहास रच्दै पूर्व हार्वर्ड विद्यार्थी ५६ वर्र्षीया अश्वेत महिला कमलादेवी ह्यारिस उपराष्ट्रपति बन्न सफल भएकी हुन् । विश्व शक्तिराष्ट्र अमेरिकामा भएको उनको यो जितले विश्वभरकै महिला वर्गमा फरक खुसी छाएको छ । आफूलाई अमेरिकाको उपराष्ट्रपतिसँगै सिनेटर, कसैकी पत्नी, आमा र अधिकारकर्मीका रूपमा उनले परिचय सार्वजनिक गरेकी छिन् ।
हुन त अमेरिकाभन्दा अघि नै धेरै मुलुकमा महिला राष्ट्रप्रमुख भइसकेका छन् तर अमेरिकामा भने कमलादेवी नै महिलाबाट पहिलो उपराष्ट्रपति भएकी छिन् । संयोग कस्तो भने महिलाले मतदान गर्न पाएको एक सय वर्षपछि उनि उपराष्ट्रपति बनिन् । लामो राजनीतिक इतिहासमा महिला राष्ट्रपति भएको त अमेरिकी इतिहासै छैन । चार वर्षअघिको निर्वाचनमा हिलारी क्लिन्टन निर्वाचित हुने व्यापक आशा गरिए पनि अन्तिम समयमा उहाँ पराजित भईन्। राष्ट्रपतिको उम्मेदवार भने उनि पहिलो हुन् ।
कमलादेवीको यस पटकको यो विजयले चार वर्षअघि राष्ट्रपति पदमा हिलारीको हारको चोट थोरै भए पनि मत्थर गराउन सकेको महसुस गरिएको छ । तथ्याङ्क अनुसार अमेरिकामा पुरुषको तुलनामा महिला मतदाता बढी छन् । जसको पुष्टि सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा ६३।३ प्रतिशत महिलाले मतदान गरेबाट हुन्छ ।
“म महिला सङ्घर्षको लामो चरणपछि अमेरिकाको पहिलो उपराष्ट्रपति बनेँ होला तर म नै अन्तिम भने होइन । हरेक महिला र युवतीले अब देखिरहेका छन् कि यो सम्भावनाहरूको देश हो,” उनले जितपछि गरेको यो पहिलो सम्बोधनले अमेरिकामा महिलाका लागि उच्च पदको ढोका खोलिन सक्छ भन्ने आशाको सन्देश दिएको छ । त्यसका लागि सपनासहितको महत्वाकाङ्क्षा र विश्वाससहितको जीवन बाँच्नुपर्नेमा उनले जोड दिईन्।
त्यसैले अमेरिकामा इतिहास निर्माण गर्ने आफ्नी आमा, आममहिला र अश्वेत जातिका महिलासँगै अमेरिकाका सबै महिला जितको हकदार रहेको उनले स्मरण समेत गरिन् । उनले महिला जसले सबैको समानता, स्वतन्त्रता र न्यायका लागि अत्यधिक सङ्घर्ष गरिरहेको उल्लेख गरिन्। विशेषगरी अश्वेत जातिका महिलाले अमेरिकाको प्रजातन्त्रका लागि महìवपूर्ण योगदान गरेको उनको भनाइ छ । “म आफैँ पनि मेरो पति डगलस एमहाफको काँध चढेर आज अमेरिकाको उपराष्ट्रपति बनेको छु,” आफू प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको उनले स्पष्ट गरिन्।
उपराष्ट्रपति ह्यारिस आफ्नी चेतनशील आमा श्यामलाको औँला समाउँदै अमेरिकी राजनीतिक यात्रामा प्रवेश गरेकिहुन् । मानिसले आफ्नो जीवनमा गुनासो गरेर समय व्यतित गर्नुभन्दा केही राम्रो गरेर देखाउन सक्नुपर्ने प्रेरणा ह्यारिसका लागि अमृत बन्यो । जमैकाका अर्थशास्त्रका विद्यार्थी डोनाल्ड ह्यारिस र भारतकी पोषण तथा हर्मोन सम्बन्धित विषयकी विद्यार्थी श्यामला क्यालिफोर्नियामा विद्यावारिधि गर्दा सन् १९६० ताका भेट भएको थियो ।
अधिकारकर्मी र राजनीतिक चेतना छर्ने अभियानको साझेदारीसँगै उनिहरूले एकअर्कासँग जीवन साटेका थिए । जेठी कमला र कान्छी छोरी मायाको जन्मपछि पनि उनिहरूले दुवैलाई सानैदेखि चेतनशील पथमा डोे¥याएका थिए। आन्दोलनमा आमाबुवासँगै गएका बेला प्रहरी दमनबाट ज्यान जोगाउन कमला र सानी बहिनीले कसरी दौडेर ज्यान बचाउने भन्ने जानी सकेका थिए ।